यौन रोग ग्रेनूलोमा वेनेरियम (Granuloma Venereum) र यसको उपचार
जनवरी 13, 2019 साइन्स इन्फोटेक	1 Comment उपचार, ग्रेनूलोमा वेनेरियम, डा. राम बहादुर बोहरा, यौन रोग
यौन रोग ग्रेनूलोमा वेनेरियम र यसको उपचार । यो रोग यौन सम्पर्कद्वारा एक अर्कामा फैलिने खालको रोग अन्तर्गत पर्दछ । यो रोग पनि यौन रोग हो । यो रोग (Sexual Intercourse) द्वारा सक्रमित हुनाले लिङ्गको अग्रभाग र योनीको मुखमा रातो र स-सानो नदुख्ने खालको घाउ देखिन थाल्दछ ।
यो रोग स्त्री पुरूष दुवैलाई हुने गर्दछ । Sexual Intercourse भएको १८ देखि २५ सौं दिनदेखि लक्षण देखिन थाल्दछ । यो रोग लागेका महिला वा पुरूष दुवैमा देखिन्छ । यो रोग लागेको अंग रातो (Granulomata) मा उत्पन्न हुन थाल्दछ । सामान्य रूपमा दवाउदा पनि (Bleeding) हुने गर्दछ । यो रोगको उपचार समयमा नभए बाहिर पनि फैलन थाल्दछ ।
यो रोगमा निम्न अनुसारको लक्षण देखिन थाल्दछ ।
१. गुदद्वार या योनीमा (Recto-vaginal fistula) देखिन सक्छ ।
१. टेट्रासाइक्लिन (Tetracycline) २५० देखि ५००मि.ग्राम सम्म अवस्था नुसार ६,६ घण्टाको फरकमा दिनुपर्छ ।
२. Candid Ointments दिनमा २ पटक लगाउने ।
३. फिडकरी पानीले दैनिक सफा गर्ने ।
← फेसियल प्यारालाईसिस र यसको उपचार
यौनजन्य रोग हर्पीज जेनीटेलिस र यसको उपचार →
अक्टोबर 19, 2019 अक्टोबर 19, 2019 साइन्स इन्फोटेक 2
One thought on “यौन रोग ग्रेनूलोमा वेनेरियम र यसको उपचार”